कलम छाड्दिन–टिका बिष्ट | नेपालको सम्झना
Browse » Home » कुराकानी » कलम छाड्दिन–टिका बिष्ट
कलम छाड्दिन–टिका बिष्ट
बाबा पहिल्यै बित्नुभयो । त्यसपछि मलाई पढ्न धेरै दुःख भयो । बुबाको मृत्युअघि म स्टाफनर्स बन्ने सपना देख्थेँ । तर, आर्थिक अवस्था बिस्तारै नाजुक पनि बन्दै गयो । मेरा रहर र सपनामा पनि बिस्तारै ताल्चा लाग्दै गए । मेरो स्टाफनर्स बन्ने रहर भनूँ कि सपना हुरीसरि नै उडेर गयो ।
दुःखसुख गरी दाइहरूले मलाई पढ्न सघाउनु भयो । स्कुलमा छँदा म कविता लेख्थेँ । सबैले प्रशंसा गर्थे । रुकुमको साह्रै दुर्गममा पर्छ- हाम्रो घर । घरदेखि ज्यामिरे मावि पढ्न आउँदा सधैं सानु भेरी नदी तर्नुपथ्र्यो । स्कुल पुग्न बिहान तीन घन्टाभन्दा बढी हिँडेर पनि अझै आधा घन्टा सानु भेरी नदीमा पौडनुपथ्र्यो ।
लुगा फुकाली हातमा बोकेर चिसो पानीमा पौडँदा आङै जिरिङ्ग हुन्थ्यो । साँझ-बिहान, झरी-बादल केही नभनी म यसैगरी नदी तरेर स्कुल-घर ओहोरदोहोर गर्थें । ६ र ७ कक्षा रुकुममा यसैगरी पढेँ । ८ कक्षा दाङमा पढियो । फेरि ९ र १० कक्षा यसरी नदी पौडिएरै पढेँ । जिन्दगीमा यस्तो दुःख पनि गर्नुपर्ला भनेर कहिल्यै सोचेकी थिइनँ ।
एसएलसी परीक्षा सकेर सदरमुकाम खलंगा आएपछि पत्रकारहरूको संगतमा परियो । समाचार खोज्ने, लेख्ने र छपाउने हुटहुटी बढ्दै गयो । यस्तैमा जन्तीधारा साप्ताहिक निस्कियो । र, मैले काम सुरु गरेँ । काम गर्दै जाँदा म त्यस पत्रिकाको कार्यकारी सम्पादक पनि भएँ । रुकुममा सिस्ने एफएम खुल्यो । एफएममा पनि काम थालेँ ।
केही महिनाअघि मैले दाङको गणतन्त्र दैनिक र रुकुमको जन्तीधारा साप्ताहिकमा ‘तीर्थाको सिन्दुर किन चाहियो माओवादीलाई ?’ शीर्षकको लेख लेखेँ । युद्धकालमा माओवादीद्वारा तीर्थाका श्रीमान् यदु गौतमको हत्या भएको सन्दर्भलाई लेखमा जोडिएको छ । सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेल सिस्ने एफएमको उद्घाटन गर्न रुकुम पुगेका बेला माओवादीले कालो भन्डा देखाएर ‘तीर्था तेरो सिन्दुर खोई ?…नेता तेरो पोइ’ जस्ता नारा लगाए, जुन सुनिनसक्नुको थियो । मानवीय हिसाबले पनि यस्तो नाराबाजी तितो र दुःखलाग्दो थियो । मैले त्यही विषय र सन्दर्भलाई जोडेर माओवादीको आलोचना गरेँ ।
आलेख प्रकाशित भएपछि मलाई धम्की आउन थाले- ‘खुब तीर्थाको सिन्दुर खोज्ने भाकी, तीर्थाको सिन्दुर खोजी गर्ने, तँलाई बाँच्ने मन छैन, मृतक पत्रकारको नाममा तेरो पनि नाम चढाइदिउ“m ?’ जस्ता आतंकित स्वर फोनमा सुनिन थाले । तर, फोन भने ‘नो नम्बर’ बाट आउँथ्यो । मलाई यो राम्रो लेखको प्रतिक्रिया हो भन्ने लाग्थ्यो । पछि फेरि मैलै जन्तीधारा साप्ताहिकमा ‘चढाउँदिनँ मृतक पत्रकारमा मेरो नाम’ शीर्षकको लेख प्रकाशित गरेँ ।
आक्रमण भएको दिन म कोठामै थिएँ । बिहान साढे ९ बजेतिर अपरिचित नम्बरबाट फोन आयो । फोनमा कसैले ‘तेरी माइली भाउजू बिरामी भएर सल्ले हस्पिटलमा लगेको छ,’ भनेको थियो । म कोठाबाट सल्ले जान हिँडेँ । घरबाट हिँडेको ५ मिनेटपछि ममाथि आक्रमण भयो । तत्काल मैले पत्रकार धनवीर दहाललाई फोन गरेर ‘दाइ मलाई आक्रमण भयो’ भनेकी थिएँ । मलाई पछाडिबाट दुईजनाले समाते । मैले बोकेको ब्याग पनि तानेर लगे उनीहरूले । ब्यागमा ल्यापटप, मोबाइल, रेडियो, पेन थियो । पछि उनीहरूले मेरो ब्याग खोल्न थाले । एकजनाले ‘तीर्थाको सिन्दुरको बचाउ गर्ने भएकी थिइस्, आज तेरो अन्त्येष्टि हुन्छ,’ भन्यो । मेरो मनमा केही सोचाइ आएन । कसरी प्रतिकार गर्ने भन्ने मात्र सोचेँ ।
आक्रमणकारीहरूले हुल्याहा बदलेका थिए । एकजना आक्रमणकारीले ‘तँलाई स्वर्गमा त यदुले हाल्लान् सिन्दुर, अहिले तेरै हात काटेर मै हालिदिन्छु,’ भन्यो । उनीहरूले ब्लेडले मेरो हात काट्न थाले । रगत चुहिएर जुत्तामा झर्‍यो । मैले पीडाले त्यसबेला ‘आमा’ मात्र भन्न सकेँ । उनीहरूले रुमालले मेरो मुख बाँधिदिए । ‘सक्छस् भने खुकुरीले हान्,’ भनेँ । उनीहरूले घाँटी समातेर भित्तामा ठोक्काइदिए । त्यसपछि म त घोप्टो परेर बेहोस भएछु । होस खुल्दा त म काठमाडौंको अस्पतालमा पो रहेछु ।
मैले तीर्थाको सिन्दुरबारे लेखेर एमालेको प्यारो हुन खोजेकोे पनि होइन । मैले त स्वतन्त्र पत्रकारको हैसियतले जे देखेँ, त्योमात्र लेखेकी हुँ । अब कसैको विपक्षमा लेख्दा विपक्षीलाई सिध्याउने काम अरूले नगरून् भन्ने चाहन्छु । म अहिले बाँचेकी छु । सम्पूर्ण पत्रकारको जित भएको छ भन्ने लाग्छ । जनकपुरकी पत्रकार उमा सिंहको हत्याको वर्ष दिन नपुग्दै मेरो हातका औंला चिरिए । कलमका वैरीले त मैले देहत्याग गरिसकेकी ठानेका थिए होलान् । तर, सौभाग्य भनौं भीरपखेरामा रगताम्य शरीर लिएर मूच्छिर्त भएकी ममाथि गाउँलेको आँखा परेछ र बाँचेँ । स्वतन्त्र भएर कलम चलाएकै कारण मैले यो नियति भोग्नुपर्‍यो । तर, मैले हिम्मत हारेकी छैन । बाँचुन्जेल कलम चलाइरहन्छु ।
उपचारार्थ काठमाडौं आएपछि आमाको खुब याद आइरहेको छ । घाइते भएपछि मेरी आमाको स्वर एकपटक पनि सुन्न पाएकी छैन । मलाई सम्झना छ, घरमा खाना पकाउँदै गर्दा मेरी बूढी आमाले ‘छोरी पत्रकारिता छोडिदे, तँलाई पनि उमा सिंह बनाउँछन्,’ भनेकी थिइन् । मैले निर्भीक भएर भनेकी थिएँ, ‘आमा उमा सिंहले तपाईलाई पनि चुनौती दिएकी छिन् । म मर्दा कोही पनि पत्रकार मर्नु पर्दैन भने म मर्न तयार छु आमा ।’ मैले यसो भन्दा आमा ‘तैं मरिस् भने हामीले कसलाई छोरी भन्नू नि,’ भन्दै धेरैबेर रुनुभएको थियो ।
पत्रकार सधैं निडर हुन्छ र हुनुपर्छ । तर, अहिले देशको परिस्थिति त्यस्तो छैन । त्यसै पनि चुनौतीपूर्ण यो पेसा पछिल्लो समय त झन् असुरक्षित बन्दै गएको छ । पत्रकार र पत्रकारिता जहिले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने पाठ पढेका पत्रकार लेखेकै भरमा कुनै पनि वेला आक्रमण, अपहरण र हत्या हुनसक्छ भन्ने त्रासका बीच बाँच्न विवश छन् । स्वतन्त्र पत्रकारिताको नारा जति लागे पनि स्वतन्त्र भएर लेख्न सहज छैन । यो पीडा राजधानीभन्दा दूरदराजमा रहेर काम गर्ने पत्रकारले झनै भोग्नुपरेको छ ।
अब पत्रकारका हात तरबारले काटिन र लेख्नुपर्ने औंला ब्लेडले चिरिन थालेपछि कसरी चलाउने कलम ? कसरी गर्ने स्वच्छ र निष्पक्ष पत्रकारिता ? अहिले पत्रकारले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुअघि धेरैपटक सोच्नै पर्छ । त्यही पनि पत्रकारले ज्यान हत्केलामा राखेर काम गरिरहेका छन् । डरले पत्रकारले लेख्न छोड्नु हुँदैन ।
ममाथि भएको घातक हमलाले मलाई पत्रकारिताप्रति अझै उच्चतम लगावका साथ लाग्न प्ररित गरेको छ । जिल्लामा कार्यरत पत्रकार, अधिकारकर्मी, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी तथा स्पष्ट अडान राख्ने जोकोहीलाई आफ्नो विचार राख्न र बोल्न डराउनुपर्ने अवस्था छ । धाक, धम्की, आक्रमण र भौतिक कारबाहीले त्रसित समाजमा विशेषगरी मोफसलका पत्रकारको आँट र लगनले सबै भयको साम्राज्यलाई चुनौती दिएको छ ।
मेरो स्वास्थ्य अहिले पनि ठीक छैन । बायाँ हात अहिले पनि चल्दैन । घाँटीमा ‘भेन’ लगाइरहनुपरेको छ । राति सपनामा पनि धेरैखाले मान्छे आउँछन् । एकदिन म निद्रामै आत्तिएर उठेछु र निद्रामै भागेछु । म त ढोकाबाहिर आइपुगेको रहेछु । टाउको ठोक्किएपछि मात्र थाहा भयो । अहिले पनि मान्छेको भीड देख्दा बेहोस हुन्छु कि जस्तो हुन्छ । उकुसमुकुस हुन्छ । जिउ सारा दुखिरहन्छ । डाक्टरले एक महिनाको लागि औषधि लेखिदिएको छ । मैले यसअघि कहिल्यै सिटामोल पनि खाइनँ । तर, अब औषधिविना जिन्दगी चल्दैनजस्तो लाग्छ ।
मैले मेरो भविष्यबारे सोचेकी छैन । तर, लाग्छ अब म पत्रकारितामै आफ्नो जिन्दगी खोज्नेछु । मर्नै परे पनि यही पेसामा लाग्नेछु । तर,अब जिल्लामा गएर काम गर्ने अवस्था छैन । हेरौँ समयले कता लैजान्छ ? सरकारले ढिलै भएपनि आक्रमणकारीलाई कारबाही गर्छ भन्ने लागेको छ ।
मैले मृत्यु अझै पनि नजिक देखेको छैन । बरू ‘नयाँ जीवन पाएँ’ भन्ने लाग्छ । हिजो चिनेका मान्छे अब बिर्सने हो कि भन्ने डर पनि मनमा छ ।
Posted by नेपालको सम्झना at 8:33 PM
0 comments to “कलम छाड्दिन–टिका बिष्ट”